जान्नुहोस् कसरी अधिक भ्रमणहरू प्राप्त गर्न इन्स्टाग्राममा कथाहरू साझा गर्ने
के तपाईंलाई थाहा छ ईन्टाटाग्राम कथाहरू सुविधाहरूले तपाईंको प्रोफाइलमा अन्य प्रयोगकर्ताहरूको भ्रमण बढाउँदछ? अझै थाहा छैन इन्स्टाग्राममा कथाहरू कसरी साझेदारी गर्ने? तपाइँ यसलाई कसरी गर्ने सिक्न चाहानुहुन्छ? तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ! अर्को पोस्टमा म तपाईंलाई यस अद्भुत सामाजिक नेटवर्कमा सामग्री साझा गर्न आवश्यक जानकारी देखाउनेछु।
इन्स्टाग्रामको सफलताले संसारभरका मानिसहरूलाई यसमा आफ्नो खाली समयको अंश लगेको छ। कथाहरू पनि, यसको सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई मन परायो किनकि यसले भ्रमणको दायरा बढाउँदछ प्रोफाइलमा। यसको लागि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई तपाईंको कथाहरूमा सामग्री अपलोड गर्ने तरिका थाहा छ र यो लेखमा म तपाईंलाई यो सिकाउनेछु कि यसलाई कसरी सही तरिकाले गर्नुपर्दछ।
इन्स्टाग्राम कथाहरू मा तपाईं आफ्नो मनपर्ने सामग्री थप्न को लागी सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ इमोटिकन्स, पाठ र केहि अन्य प्रभावहरू जुन तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं यो नयाँ प्रकार्य तपाईंको लागि प्रस्ताव गर्ने सबै कुरा जान्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई अन्तसम्म यो पढाइ जारी राख्न सल्लाह दिन्छु। मसँग सामेल हुनुहोस्!
इन्स्टाग्राम कथाहरू: तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
इन्स्टाग्राम कथाहरू, एक नयाँ फिचर हो जुन यस सामाजिक नेटवर्कलाई यसका प्रयोगकर्ताहरू बीच यसको लोकप्रियता कायम राख्नको लागि लागू गरेको छ। यी प्रकाशनहरूको अवधि २ twenty घण्टा मात्र हुन्छ र फोटोग्राफहरू, बुमेराrang्ग, प्रिरेर्डर्ड र लाइभ भिडियोहरू हुन सक्छन्। पनि, यो सामग्री को साथ सम्पादन गर्न सकिन्छ इमोजिस, स्टिकरहरू, वाक्यांशहरू र ब्रश प्रभावहरू।
यस प्रकार्यले तपाइँको प्रोफाईल ओभरलोडको आवश्यकता बिना नै, Instagram खाता सक्रिय राख्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए तपाईं आफ्नो खाताको दृश्यहरू र भ्रमणहरूको ट्राफिक बढाउँदा वास्तविक समयमा तपाईंले चाहानु भएको सबै सामग्री प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी इन्स्टाग्राम कथाहरू साझा गर्ने?
इन्स्टाग्राम कथाहरूमा सामग्री अपलोड गर्नु यो अद्भुत सामाजिक नेटवर्कको प्रेमीहरूको आवश्यकता बन्यो। यस अनुप्रयोगले यति धेरै सफलता पनि हासिल गरिसकेको छ कि धेरै ब्रान्डले यसलाई अब जनताको साथ पुग्न अझ कभर गर्न प्रयोग गर्दछन्।
यस उद्देश्यका लागि, म तल छवटा साधारण चरणहरूमा तपाईलाई देखाउने छु कसरी सही तरिकाले Instagram कथाहरूमा सामग्री अपलोड गर्ने। ध्यान दिनुहोस्!
1। आफैलाई चिन्नुहोस्
यो अद्भुत सामाजिक नेटवर्क प्रयोग गर्न सजिलो छ। यसैले यसको सबै उपकरणहरू र प्रकार्यहरू पत्ता लगाउन तपाईंको समय लिनुहोस्। प्रत्येक आइकनमा सोधपुछ गर्न ध्यान दिनुहोस् जसले तपाईंको ध्यान समात्दछ त्यसैले तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूले के प्रदर्शन गर्छन्। अन्यथा, तपाईं सबै सुविधाहरूको फाइदा लिन सक्षम हुनुहुने छैन यसले प्रस्ताव गर्दछ कि तपाईंको सबै प्रकाशनहरू अचम्मको देखिन्छ।
2 तपाईंको कथाको आइकन फेला पार्नुहोस्
जब तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता खोल्नुहुन्छ, प्रयोगकर्ताहरूका सबै कथाहरू तपाईंले अनुसरण गर्नुहुनेछ शीर्षमा देखा पर्नेछ। साथै, बायाँ तिर तपाईले चिन्ह (+) भएको आइकन भेट्टाउनुहुनेछ जुन "तपाईंको कथा" भन्छ। सामग्री सिर्जना गर्न सुरू गर्न तपाईले यसलाई थिच्नु पर्छ।
कथाहरू सुविधाहरूमा पहुँच गर्न अर्को तरिका हो मुख्य औंलाबाट दायाँ तिर तपाइँको औंलाको साथ स्लाइडिंग। यसले स्वचालित रूपमा इन्स्टाग्राम क्यामेरामा लैजान्छ ताकि तपाईं आफ्नो कथाहरूमा कस्तो प्रकारको सामग्री पोष्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर रोज्न सक्नुहुन्छ।
3 सामग्री छनौट गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम कथाहरूले प्रस्ताव गर्ने फाइदाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यसले तपाईंले गर्न चाहनुहुने पोष्टहरूको सीमा सीमित गर्दैन। त्यसोभए, चिन्ता गर्नुहोस् तपाईंको मनपर्ने क्षणहरू क्याप्चरको बारेमा भिडियोहरू, फोटोग्राफरहरू, वा बुमेराrangको बारेमा र तिनीहरूलाई यो सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गर्नुहोस्।
तस्विर लिनका लागि केवल "तपाइँको कथा" सुविधामा जानुहोस् र स्वचालित रूपमा तपाईं क्यामेरा ले। केवल द्रुत रूपमा स्क्रिनको तल मध्य बटन थिच्नुहोस्। यदि यसको विपरितमा तपाइँ एक भिडियो चाहनुहुन्छ भने, यसलाई केवल तपाइँको रेकर्डि duringको समयमा थिच्नुहोस् जुन and० र xt० सेकेन्डको बीचमा रहन्छ।
नयाँ अपडेटसँग ह्यान्ड्स-फ्रि विकल्प छ। यसको साथ तपाईं बटन थिच्न र होल्ड गर्न आवश्यकता बिना तपाईंको भिडियोहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, छोटो दोहोरिएको आन्दोलनको रेकर्डि .को लागि बुमरैrang उपकरण छ। थप रूपमा, अधिक कार्यक्षमताको लागि तपाईं एक लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईं यस समयमा र समय सीमा बिना प्रसारण गर्न सक्नुहुनेछ।
4 तपाईंको स्मार्टफोनको ग्यालरीबाट अपलोड गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम कथाहरूको अर्को आश्चर्य, यो यो हो कि यसले तपाईंलाई तपाईंको स्मार्टफोनमा भण्डार गरिएको सामग्री अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसो भए तपाईको साथ बाड्न सक्नुहुन्छ अनुयायीहरू लोकप्रिय टीबीटीमा पुराना क्षणहरूका फोटोग्राफहरू (बिहीबार श्रद्धांजलि)।
यो गर्न, एक पटक तपाईं "आफ्नो कथा" मा हुनु हुन्छ स्वाइप गर्नुहोस् र स्वचालित रूपमा तपाईंलाई ग्यालरीमा लैजानुहोस् तपाइँको स्मार्टफोनको। एक पटक तपाईं त्यहाँ भएपछि, सामग्रीको प्रकार चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो कथाहरू र भोलामा प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ!
5 सम्पादन गर्नुहोस् र रचनात्मक सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
एकचोटी तपाईंले सामग्रीहरू चयन गर्नुभयो जब तपाईं आफ्नो कथाहरूमा प्रकाशित गर्न योजना गर्नुहुन्छ तपाईं साना संस्करणहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई विभिन्न स्रोतहरूसँग तपाईंको रुचिको फ्रिक्वेन्सीहरू लेख्नको लागि ईमोटिकन्स र पाठ उपकरण प्रदान गर्दछ। र यदि तपाईंको इच्छा तपाईंको मनपर्ने संगीतको साथ सामग्री अपलोड गर्नुहोस् तपाईं यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ!
तपाइँका अनुयायीहरूको राय जान्न सर्वेक्षण र प्रश्नहरू थप्नुहोस्। तपाईं ह्यासट्याग फारम, समय, स्थान मा स्टिकर थप्न सक्नुहुनेछ र मित्र वा व्यापार पार्टनरको खाता लेबल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस प्रकार, तपाइँले इन्स्टाग्राम कथाहरू सुविधाहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको सबै उपकरणहरूको साथ रमाईलो गर्दा हडताल सामग्री सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
6 तपाईंको कथा प्रकाशित गर्नुहोस्
अघिल्लो चरणहरू पूरा गरेपछि, अब यो सामग्री प्रकाशित गर्न मात्र बाँकी छ। यो गर्नका लागि तपाईले आइकन थिच्नु पर्छ जसले स्क्रिनको तल अवस्थित "तपाइँको कहानी" भन्छ। एक पटक प्रकाशित भयो, सबै खाताहरू जसले तपाईंलाई पछ्याउँदछ तपाईंको कथाहरू हेर्न।
दिमागमा राख्नुहोस्! यदि तपाईंसँग निजी इन्स्टाग्राम खाता छ भने बाह्य प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्न तर उनीहरूले तपाईंको कथाहरू हेर्न सक्दछन्। यदि तपाइँ तपाइँका कथाहरूका साथ मोहित गर्न व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भने, म तपाइँलाई अनुरोध गर्दछु कि तपाइँले अनुरोधहरूको उच्च दर प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसले तपाईका अनुयायीहरूको संख्या बढाउँदछ।
इन्स्टाग्राम कथाहरूका अन्य सुविधाहरू?
यदि तपाईं यस समयमा सिर्जना गरेको कहानी प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्न भने, इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई पछि प्रकाशनको लागि बचत गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ। यो गर्नका लागि तपाईले "सेभ" वा "डाउनलोड" प्रतिमा थिच्नु पर्छ र सामग्री तपाईको स्मार्टफोनमा तपाईले यसलाई डिजाईन गर्नु भएको ठाउँमा भण्डार गरिनेछ।
अर्को अविश्वसनीय विकल्प जुन ईन्स्टाग्राम कथाहरूले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ तपाईंको साथीलाई डिजाइन गरिएको सामग्री पठाउनु हो। त्यसो गर्न, तपाईंले भर्खर आईकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ जसले "पठाउनुहोस्>" भन्दछ र यसले तपाईंलाई प्रोफाइलहरूको सूचीमा तान्नेछ। त्यसोभए, तपाइँले कथित सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने योजना गरेको प्रयोगकर्ता छान्नुपर्दछ र "पठाउनुहोस्" सजिलो र छिटो थिच्नुहोस्!
थपिएको कार्यक्षमताका लागि, इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई "सर्वश्रेष्ठ मित्र" सुविधा प्रदान गर्दछ। यसको कार्य भनेको यो सामाजिक नेटवर्कमा साथीहरूको सूची सिर्जना गर्नु हो जुन तपाईंको कथाहरूबाट सामग्री प्राप्त गर्न सक्दछ। यसैले तपाईले चयन गर्न सक्नुहुनेछ कि कसले तपाईका कथाहरू पालना गर्दछ र कसले अवलोकन गर्दैन।
तपाईंको इन्स्टाग्राम कथाहरूमा अधिक दृश्यहरू प्राप्त गर्न सुझावहरू
हालका वर्षहरूमा इन्स्टाग्राम यस्तो लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क भएको छ। त्यो भन्दा धेरै दर्शकहरूको उच्च अनुक्रमणिका पाउनु त्यति नै जटिल छैन जस्तो तपाई सोच्नुहुन्छ। यी सुझावहरूको नोट लिनुहोस् म विशेष गरी तपाईंको लागि ल्याउँछु।
तपाईंको कथाहरू सेट अप गर्नुहोस्
तपाईका धेरै पोष्टहरू कभर गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जुन प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंलाई पछ्याउँछन् उनीहरूले तपाईंको कथाहरू साझा गर्न सक्दछन्। तपाईं तिनीहरूलाई कसरी कन्फिगर गर्ने थाहा छैन? म तिमीलाई सिकाउनेछु!
तपाईंको प्रोफाइल को सेटिंग्स अनुभाग प्रविष्ट गर्नुहोस्।
त्यसो भए, कहानी परिमार्जन गर्नुहोस् विकल्प तिनीहरूलाई परिमार्जन गर्नका लागि।
यस पछि, अनुमति सेयर गर्ने सेक्सन पत्ता लगाउनुहोस् र यसलाई सक्रिय गर्न थिच्नुहोस्।
अन्तमा, तपाईका अनुयायीहरू र साथीहरूले तपाईंको प्रोफाइलमा बढि पहुँच सिर्जना गर्न प्रकाशित प्रत्येक कथा साझा गर्न सक्दछन्।
उल्लेख प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको ईस्टाग्राम कथाहरूमा तपाईंको साथीहरू, ग्राहकहरू वा सहयोगीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। साझा ब्याजको रचनात्मक सामग्री सिर्जना गरेर यो गर्न प्रयास गर्नुहोस् जुन सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न सक्दछ। यसले कुराकानीलाई निम्त्याउँदछ कि घनिष्ट सम्बन्ध सिर्जना गर्दछ। यदि तपाईं यो प्राप्त, तपाईं निम्न सिफारिसहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको सबैभन्दा वफादार अनुयायीहरूलाई उनीहरूको प्रोफाईलमा तपाईंको कथा साझा गर्न आमन्त्रित गर्नुहोस्।
तपाईंको सहयोगीहरूको साथ योजना बनाउनुहोस् उनीहरूको पेशेवर प्रोफाइलको कथाहरूमा प्रकाशित हुन र तपाईं पनि त्यस्तै गर्न कोशिस गर्नुहुन्छ।
कथाहरू सिर्जना गर्नुहोस् जहाँ तपाईं एक अनुयायीको चिन्ता, सुझाव, वा प्रशंसाको जवाफ दिनुहुन्छ। यसले तिनीहरूलाई देखाउँदछ कि तपाईंले तिनीहरूलाई पढ्नुभयो, र उनीहरूले के महसुस गर्छन् भन्ने कुराको ख्याल राख्नुहुन्छ।
स्थान ट्याग नबिर्सनुहोस्
केहि प्रयोगकर्ताहरू, सम्भावित ग्राहकहरू वा व्यापार साझेदारहरूको लागि सम्झनुहोस् यो तपाईंको कार्य क्षेत्रको बारेमा जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसले तिनीहरूलाई तपाईंको नजिक महसुस गर्न अनुमति दिनेछ। पनि, तिनीहरूले भावना महसुस गर्नेछन् कि उनीहरूले तपाईंलाई अलि बढी चिनेका छन्।
यो सल्लाह विशेष रूपमा ती ब्राण्डहरूको लागि सिफारिश गरिन्छ जुन उनीहरूको उत्पादनहरू वा / वा इन्स्टाग्राममा सेवाहरूको प्रचार गर्दछ। किनभने, शारीरिक मा बिक्री पनि यसको मजबूत को एक हिस्सा। यो पनि लोकप्रिय हैशटैगको साथ आफ्नो कथाहरू मा प्रकाशित गर्न नबिर्सनुहोस्।
तपाइँलाई बिदाइ गर्ने समय आएको छ। मलाई थाहा छ इन्स्टाग्राम कथाहरू कसरी साझेदारी गर्ने भन्ने बारेमा सबै जानकारी उपयोगी छ।
अब कुनै पनि प्रतीक्षा नगर्नुहोस्! र सुरु गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम कथाहरूमा तपाईंको मनपर्ने सामग्री अपलोड गर्नुहोस्।
कहाँ नि: शुल्क खेलहरू फेला पार्ने? सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू जान्नुहोस्!